Ngwaahịa principlekpụrụ na-arụ ọrụ nke hydraulic jack bụ na spana na-ebugharị obere piston ahụ elu. A na-amị mmanụ n'ime mmanụ mmanụ n'ime ala nke obere piston site na ọkpọkọ mmanụ na valvụ otu ụzọ. Mgbe eriri ahụ na-agbada ala, a na-egbochi obere piston ahụ site na valvụ otu ụzọ. A na-agbanye mmanụ dị n'akụkụ ala nke obere pistin n'ime akụkụ ala nke nnukwu pistin ahụ site na circuit mmanụ dị n'ime na valvụ otu ụzọ, na akụkụ ala nke obere pisto ...
Product Ihe haịdrọlik ọdụ 1. Classic haịdrọlik akara usoro, ike ịzọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ imewe. 2. siri ike usoro imewe ana achi achi elu ume itinye n'ọrụ. 3. Obere uda, enweghi leakage. 4. Akụrụngwa ndị bụ isi bụ ụdị ama ama nke mba ụwa, usoro nchekwa na nchekwa. 5. Kọmpat Ọdịdị, ike ike, elu na-arụ ọrụ ugboro. 6. All mmiri hụ na ezigbo interchangeability na elu mmalite ọnụego. Nọgide Na-enwe Ọ bụ ihe dị mkpa iji jikwaa mmanụ pollutio ...
Product Ihe Hydraulic ike unit bụ a micro ike haịdrọlik ojii. A na - ejikọ ya na moto, mgbapụta mmanụ, ngọngọ valvụ, ngọngọ nke onwe ya, valvụ hydraulic na ngwa ngwa hydraulic dị iche iche (dịka accumulator). E jiri ya tụnyere ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic nke nwere otu ụkpụrụ ahụ, ọ nwere uru nke usoro kọmpat, obere olu, ịdị arọ dị elu, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ọdịdị mara mma, enweghị nchapu na ọnụ ala. Ugbu a, ngwaahịa a nwere b ...
Ngwaahịa 1.Weirun nwere usoro njikwa zuru ezu na sayensị maka akụrụngwa na akụrụngwa. Shandong weirun Auto Parts Co., Ltd. na-ghọtara site ụlọ ọrụ n'ihi na ya ike n'ezi, ike na ngwaahịa mma. Nabata ndị enyi sitere na ụdị ndụ niile ị gara leta, ntuziaka na mkparịta ụka azụmahịa. Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ nrụpụta ọrụ ọkachamara. Ngwaahịa ndị bụ isi bụ ụdị dị iche iche nke ihe mkpuchi breeki. O adabara niile di iche iche nke minitype, ìhè na oké-oru ndapụta ...
Nkọwa ngwaahịa 1. Ọdịdị nke skissor Jack Ọ nwere ntọala, ụzọ aka abụọ na-akwado ya, ụzọ aka abụọ na-akwado ya, ihe ndozi, ntụpọ ụgbọ elu, mkpụrụ, kredel, pin shaft na skri. A na-atụgharị ọnụ nke otu ụzọ nke abụọ na-akwado aka n'ime n'ime stiffeners, na nsọtụ ha na-kpụrụ n'ime Kwadobe na meshed; a na-atụgharị akụkụ nke otu ụzọ mkpịsị aka nkwado ala ka mpụta na ọgịrịga na - agba ume, ma na - akpụ nsọtụ ya ka ọ bụrụ wiilị gia na meshed. Pkpụrụ nke mkpa scissor The ...